Maxaa Kajira in xilibaanadii la Eryay lagu daray xilibaanad lagu badalay xilibaanad kale?. | ogaden24
Maxaa Kajira in xilibaanadii la Eryay lagu daray xilibaanad lagu badalay xilibaanad kale?.
Waxaa siwayn loo Hadal hayaa in Gabadh xilibaanada oo aan kujirin Liiska xilibaanadii Eedaysnaa ee shalay xasaanada laga xayuubiyay in si ula kac ah loogu daray, iyada oo lagu badalay Gabadh xilibaanada oo ay isku magac-yihiin kana mid ahayd xilibaanadii Eedaysnaa.
Arintan oo baraha bulshada siwayn loogu Hadal Hayo ayaa si aan wax uga Ogaano waxaanu xidhiidh lasamaynay xubno katirsan xukuumada deegaanka, balse waxaa ay ka Gaabsadeen inay jiritaanka warkaasi u xaqiijiyaan warbaahinta madaxa banaan ee Ogaden24.
” Anigu ma Hubo Gabadha in Gabadh lagu badalay balse waxaan Hubaa inaysan kujirin xubnihii Horay loo sii Ogaa ee magacdoodu banaanka Yaaleen aniga iyo Rag saaxiibaday ahna waan kujiraa, kama se Hordhacayo sida wax u dhaceen wixii Jirana way soo bixi doonaan” ayuu yidhi mid kamida masuuliyiinta Heer deegaan oo diiday inaan magaciisa adeegsano.
Eeg Horta Gababdha la leeyahay Gabadhaa lagu badalay anigu waxba kasheegi maayo waxaan se kuu Hubaa Ayaan Shakuul meel ay wax ka musuqdana maba ayna soo marin Tacadina warkii isaga daa, ayuu yidhi mar kale masuulka oo intaasi kudaray, inay Hawsha Lakaashan doonaan Hay’adaha ay Khusayso iyo madaxda sare ee deegaanka sax iyo Khalad sida ay wax u dhaceena ay soo bixi doonto.
Tan iyo Galinkii dambe ee shalay waxaa baraha bulshada kasocdo doodo iska soo Horjeeda oo laxidhiidha warka sheegaya in xilibanad Ayaan Cabdi Xasan oo kujirtay Liiska xilibanada Eedaysan ee xasaanada ka xayuubintu usoo baxday in lagu badalay xilibanad Ayaan Shakuul.
Warkani oo ilaa iyo Haatan aysan Jirin cid xaqiijinaysa ayaa ah kan loogu Hadal Haynta badan yahay saacadihii lasoo dhaafay, lamana Oga in xukuumada madaxwayne Mustaf ay kabixin doonto Jawaab maadaama Eedayntu tahay mid reebi karta saamayn Taban.
Isha kuhay kolba waxa kasoo Kordha warkani